ZClassic စျေး - အွန်လိုင်း ZCL ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ZClassic (ZCL)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ZClassic (ZCL) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ZClassic ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $1 643 751.00
volume_24h_usd: $3 164 630.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ZClassic တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ZClassic များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZClassicZCL သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.553ZClassicZCL သို့ ယူရိုEUR€0.469ZClassicZCL သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.423ZClassicZCL သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.506ZClassicZCL သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.03ZClassicZCL သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.5ZClassicZCL သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč12.26ZClassicZCL သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.06ZClassicZCL သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.738ZClassicZCL သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.773ZClassicZCL သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$12.6ZClassicZCL သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.28ZClassicZCL သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$2.93ZClassicZCL သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹41.5ZClassicZCL သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.92.21ZClassicZCL သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.759ZClassicZCL သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.836ZClassicZCL သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿17.16ZClassicZCL သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥3.85ZClassicZCL သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥58.47ZClassicZCL သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩660.64ZClassicZCL သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦209.78ZClassicZCL သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽40.67ZClassicZCL သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴15.36
ZClassicZCL သို့ BitcoinBTC0.00005 ZClassicZCL သို့ EthereumETH0.00143 ZClassicZCL သို့ LitecoinLTC0.00965 ZClassicZCL သို့ DigitalCashDASH0.00642 ZClassicZCL သို့ MoneroXMR0.00639 ZClassicZCL သို့ NxtNXT45.58 ZClassicZCL သို့ Ethereum ClassicETC0.0777 ZClassicZCL သို့ DogecoinDOGE158.82 ZClassicZCL သို့ ZCashZEC0.0067 ZClassicZCL သို့ BitsharesBTS21.41 ZClassicZCL သို့ DigiByteDGB21.07 ZClassicZCL သို့ RippleXRP1.86 ZClassicZCL သို့ BitcoinDarkBTCD0.0196 ZClassicZCL သို့ PeerCoinPPC1.99 ZClassicZCL သို့ CraigsCoinCRAIG259.15 ZClassicZCL သို့ BitstakeXBS24.25 ZClassicZCL သို့ PayCoinXPY9.93 ZClassicZCL သို့ ProsperCoinPRC71.35 ZClassicZCL သို့ YbCoinYBC0.000359 ZClassicZCL သို့ DarkKushDANK182.33 ZClassicZCL သို့ GiveCoinGIVE1230.71 ZClassicZCL သို့ KoboCoinKOBO129.56 ZClassicZCL သို့ DarkTokenDT0.509 ZClassicZCL သို့ CETUS CoinCETI1640.96